ऋषि कपुर र इरफान खानको शानदार अभिनय देख्न पाइने ५ यादगार फिल्म - समय-समाचार
ऋषि कपुर र इरफान खानको शानदार अभिनय देख्न पाइने ५ यादगार फिल्म
समय-समाचार बिहीबार, २०७७ वैशाख १८ गते, २२:२९ मा प्रकाशित
‘सुपरस्टार’ नभनिए पनि इरफान धेरै प्रशंसकका नजरमा उदाउँदा ‘स्टार’ थिए। टेलिश्रृंखलादेखि बलिउड-हलिउड फिल्म, जापानी मिनी–सिरिजसम्म उनले आफ्नो दमदार अभिनय देखाएर दर्शकको मन जिते।
सधैं नयाँ भूमिका गर्न उत्सुक इरफानका युट्युबमा उपलब्ध केही फिल्मको सूची यहाँ राखिएको छ जसमा उनको शानदार अभिनय देख्न पाइन्छ। यदि यी फिल्महरु यहाँ देख्नु भएन भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस
पात्रका आधा-अधुरा सम्बन्धहरूलाई निर्देशक अनुराग बासुले कुशलताका साथ बुनेका छन्। महानगरको भिडमा भौतिक र मानसिक खुसी खोज्दै भौंतारिने पात्रहरूको जेलिएको सम्बन्धको कथा भन्ने ‘लाइफ इन अ मेट्रो’ ले संगीत, स्क्रिनप्ले र कलाकारको अभिनयका कारण त्यो वर्षकै राम्रो फिल्ममा दर्ज भएको थियो।
मोन्टी र श्रुतिको भूमिकाका लागि इरफान र कोनकोनाले दुवैले सहायक अभिनेता र सहायक अभिनेत्रीको फिल्मफेयर अवार्डलगायत अन्य अवार्ड जितेका थिए। यसअघि इरफानले ‘हासिल’ फिल्मबाट नकारात्मक भूमिकाका लागि अवार्ड जितेका थिए। ‘लाइफ इन अ मेट्रो’ बाट सहायक अभिनेताका रुपमा अवार्ड जित्नु उनी फरक खालका चरित्रमा जम्न सक्छन् भन्ने प्रमाण थियो।
‘मकबूल’ ले दर्शकलाई मुम्बई अन्डरवर्ल्डको दुनियाँमा पुर्याउँछ। अब्बाजी (पंकज कपुर) यो दुनियाँका बादशाह हुन् भने मकबूल (इरफान खान) उनका मुख्य मुख्य मान्छे।
नसिरुद्दीन शाह, ओम पुरी, पंकज कपुर, पियूष मिश्राजस्ता कलाकारले भरिएको ‘मकबूल’का चरित्र बलिया छन्। विशाल भारद्वाजले शेक्सपियरको नाटकबाट प्रेरित शृंखलाबद्ध रूपमा तीन फिल्म बनाएका थिए- ‘मकबूल’, ‘ओमकारा’ र ‘हैदर’।
यीमध्ये मकबूल ‘म्याकबेथ’, ओमकारा ‘ओथेलो’ र हैदर ‘हेम्लेट’मा आधारित थिए। विशाल भारद्वाजको प्रस्तुति र कलाकारको शानदार अभिनयले ‘मकबूल’ विशेष फिल्म बन्यो। यसमा इरफानको अभिनय पनि विशेष छ।
‘मदारी’ मा सामाजिक विषयवस्तुको उठान गरिएको भए पनि अब्बल फिल्म होइन। तर इरफानलाई पर्दामा देखिरहन चाहनेका लागि यो फिल्मले आनन्द दिन्छ।
ऋषि कपुरका ५ यादगार फिल्म
बलिउडका सत्तरी-असी दशकका ‘लभर ब्वाई’ ऋषि कपुर ६७ वर्ष उमेरमा बिहीबार आफ्नो जिन्दगीबाट बिदा भए। दुई वर्षदेखि रगतको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ऋषिले करिब एक वर्ष न्यूयोर्कमा उपचार गराए। गत सेप्टेम्बरमा मुम्बई फर्किएका उनलाई केही दिनअघि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।
बलिउड यस्तो ठाउँ हो, जहाँ स्टारपुत्रहरूले सहजै प्रवेश त पाउँछन्, तर खासै फाप्दैन। उनीहरूको कामलाई सधैं ‘महान’ आमाबाबुको विगतसँग दाँजिन्छ। राम्रो गरे जस आमाबाबुले लैजान्छन्, नराम्रो गरे ‘फलानोको छोरा भएर यस्तो झूर काम गर्‍यो’ भन्दै उल्याउँछन्।
उनको ‘डेब्यू’ फिल्म ‘मेरा नाम जोकर’ (१९७०) लाई मानिन्छ। यो फिल्म सुटिङ हुँदा ऋषि १६ वर्षका थिए। उनले यसमा राज कपुरको बाल भूमिका (राजु) गरेका छन्।
उनको ‘लभर ब्वाई’ छविको सुरूआत भने ‘बबी’ (१९७३) बाट भयो। ‘बबी’ हिट भए पनि यसपछिका धेरै वर्ष उनका फिल्मले सफलता पाएनन्।
सन् १९८० दशकपछि भने उनको सफलता उकासियो। त्यो समयमा उनले खेलेका ‘सरगम’, ‘प्रेमरोग’, ‘नसिब’, ‘सागर’, ‘नगिना’ लगायत स्मरणीय छन्।
धनी परिवारका छोरा र गरिब परिवारकी छोरीबीचको प्रेम कथामा बलिउडमा धेरै फिल्म बनेका छन्। ‘बबी’ यस्तै कथामा बनेको फिल्म हो।
मिस्टर नाथ (प्राण) र सुषमा (सोनिया सहनी) व्यस्त दिनचर्या र अन्य प्राथमिकताबीच छोरा राज (ऋषि कपुर)लाई समय दिन बिर्सन्छन्। उनीहरूसँग छोरालाई दिने समय छैन। राज आफ्नो स्याहारसुसार गर्ने मिसेज ब्रिगान्जा (दुर्गा खोते) लाई आमासरह मान्छन्। फिल्ममा उनी ज्याक (प्रेमनाथ) की ‘माइ’को भूमिकामा छन्।
यो त्यो वर्षको सबभन्दा हिट फिल्म बनेको थियो। फिल्मको गीत-संगीत, कलाकारको अभिनयसँग ऋषि र डिम्पलको ‘फ्रेस’ छवि पनि एउटा कारण बन्यो। फिल्मको ‘मैं शायर तो नहीँ’, ‘झुट बोले कौवा काटे’, ‘ना मागूँ सोना चाँदी’, ‘हम तुम इक कमरे मे बन्द हो’ आदि गीत चर्चित छन्।
ती धनाढ्य व्यक्तिले पेटी पुर्‍याइदिनु भनेका मान्छे व्यापारी किशोरीलाल (कमल कपुर) हुन्छन्। हिरा भएको पेटी उनले लिएको केही समयमै उनलाई एउटा गिरोहले पछ्याउँछ। भाग्दाभाग्दै उनी साइकल स्ट्यान्डमा पुग्छन् र एउटा साइकलको डिकीमा त्यो हिरा लुकाउँछन्। साइकल सन्जय कुमार (तारिक खान)को हुन्छ जसमा ‘एसके’ लेखिएको हुन्छ।
यसपछि फिल्ममा धेरै हेराफेरि चल्छ। के सन्जयले किशोरीलालसँग कुनै बदला लेलान्? काजललाई मनैदेखि मन पराउने सन्जय र प्रेमको नाटक गरेर माया गर्न खोज्ने मन्जीत/राजेशमध्ये काजलले कसलाई माया गर्छिन्? राजेशको काजलप्रतिको नक्कली प्रेम साँचो प्रेममा बदलिए के होला? हिरा कसले पाउला? हिराको खोजीमा रहेका गिरोहको के होला? यो जान्न हेर्नुस्, ‘हम किसी से कम नहीँ’।
‘थ्रिलर’ र त्रिकोणात्मक प्रेम कथा सँगसँगै अघि बढ्ने ‘हम किसी से कम नहीँ’ रोचक कथासँगै मधुर गीत-संगीतका कारण पनि चर्चित छ। फिल्मको ‘क्या हुआ तेरा वादा’, ‘बचना ए हसिनो’, ‘चाँद मेरा दिल’जस्ता गीत चर्चित छन्।
इतिहास र लोककथाका रुपमा जीवित लैला मजनुको यही अमर कथामा बनेको फिल्म ‘लैला मजनु’ मा ऋषि कपुर र रंजिताले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
आदर्श प्रेमका प्रतीकका रुपमा जीवित लैला मजनुको अमर प्रेमको अन्तर्य महशुस गर्न हेर्नुस्, ‘लैला मजनु’।
एक हिसाबले शीतल र यश फुर्सदिला भएका छन्। पटक पटक हुने उनीहरूको आकस्मिक भेटले उनीहरूलाई नजिक बनाउँदै लैजान्छ। यो निकटताले यी दुई जना खुसी भए पनि उनीहरूका सन्तानको भने होसहवाश उड्छ। यसपछि उनीहरूको प्रेममा आउने ‘ट्विस्ट’लाई रमाइलोसँग देखाइएको छ।
गोल्डम्यानलाई पक्रन चार फरक पृष्ठभूमिका पात्रहरू खटाइएको छ- बल्ली (इरफान खान) रुद्र (अर्जुन रामपाल), जोया (हिमा कुरेशी) र असलम (आकाश गाहिया)। फिल्मलाई बीचबीचमा बल्ली अर्थात् इरफानले ‘न्यारेट’ गर्छन्।
यो सम्पुर्ण साभार सेतो पाटीबाट गरिएको हो र यसको रिपोर्टिङ्ग प्रभाकर गौतमले गरेका हुन् ।